Archive du 03/05/2012
�Mijoro aho !�
Manoloana ireo antsojay sy fingampingana isan-karazany natao sy atao aminy tato anatin�izay telo taona izay dia nisafidy ny hivoaka tamin�ny fahanginany ny orinasa Tiko, ka nampiantso mpanao gazety teny amin�ny Tiko Tanjombato, omaly alarobia 2 mey.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Lalatiana Rakotondrazafy sy Fid�le Razara Pierre Notazomina an-dakazerina
Notazomin�ny zandary atao andrimaso �garde � vue� eny amin�ny Toby Betongolo nanomboka halina ireo mpanao gazety mianadahy, Fid�le Razara Pierre sy Lalatiana Rakotondrazafy, mpanentana ny fandaharana �Anao ny fitenenana� ao amin�ny radio Free-FM 104.2.
Diso vanimpotoana indray
Nahazo famatsiam-bola mitentina 600 tapitrisa Ariary avy amin�ny fanjakana foibe ny tan�nan�Antananarivo.
Niakatra fitsarana ry Kly Raymond
Niakatra fitsarana ady heloka bevava tsotra omaly ny raharaha FIGN.
Parlemantera TGV Antananarivo
: Tsy mankasitra ny fihetsiky ny parlemantera TIM
Pr Manoro R�gis Hanara-dia an�ny Dr Joseph koa ?
Raha ny tenin'ny filohan'ny tetezamita omaly no dinihana dia manana telo andro eo sisa ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Pr Manoro R�gis mba hamahana ny olan'ny mpampianatra sy hampitsaharana ny fitokonan'ny SEMPAMA manerana ny Nosy.
Andron�ny fahalalahan�ny asa fanaovan-gazety
�Aza disoina ny tantara�, hoy i Evariste Ramanantsoavina
Mbola averiko, hoy ny namana Evariste Ramanantsoavina mpanao gazety, ny teny nolazaiko tamin�ny herintaona tahaka izao ny amin�ny tsy tokony handisoan�ny mpanao gazety namana am-perinasa sy ireo mpianatra ao amin�ny sehatry ny fifandraisana sy ny asa fanaovan-gazety ankehitriny ny tantara
Olona matanjaka no mitazona ilay satroboninahitra
Mitohy hatrany ny hetsika Masoandro Maraina. Tamin�ny herinandro lasa teo dia ny faritra Itasy sy Bongolava no notsidihan�ny Maitre Avoko Rakotoarijaona sy ireo mpiara-miasa aminy, ka nandalo sy nanao famelabelaran-kevitra tao Miarinarivo, Soavinandriana, Analavory, Tsiroanomandidy izy ireo.
Taratasin�ny mpamaky: Be izay fandrebirebena izay
Fa tena hamaha olana marina ve ny SADC sa hamboly olana vaovao indray ? Izao dia efa mibitaka �ry ny mpomba ny fitondrana fa efa akaiky, hono, ny fankatoavana.
Mikatso ny fampianarana
Nidina an-dalambe ireo mpianatry ny lyc�e
Mivoatra isan�andro ny raharaha momba ny fiatoan�ny fampianarana. Nihafaingana ny fitaran�ny fitokonana ataon�ny mpampianatra hatramin�ny nidiran�ny mpanabe avy eto an-drenivohitra an-tsehatra nanampy isa ireo namany avy amin�ny SEMPAMA manerana ny Nosy.
Fahalalahana hoe ?
Andro iraisam-pirenena amin�ny fahalalahan�ny asa fanaovan-gazety ny anio 3 mey, ary mankalaza izany tahaka ny firenena maro isika eto Madagasikara.